सुशिल र वासुदेवको कथा! - Blogs of Sagar Prasai
सुशिल र वासुदेवको कथा!
Sushil, Basudev and their team member in CAN Infotech Stall
स्थानः क्यान ईन्फोटेक, भृकुटीमण्डप
स्टल नः T18
टेबुल पछाडी सुशिल र वासुदेव अधिकारी बसेका छन्। साथै छन् उनीहरूका अरू केही साथीहरू र केही भोल्युन्टर। उनीहरूको स्टलमा अरू तिरको जस्तो त्यति भिड छैन तर खाली पनि छैन। एकजना भर्खरै आईपुगेका भिजिटरले सोधे- यो चाही के को स्टल हो?
"ए हजुर नमस्कार!" सुशिलले मुस्कानका साथ उनको स्वागत गरे। "यहाँ चाँहि हामी दृष्टिबिहिन मानिसहरूले कसरी प्रविधिको प्रयोग गर्छन् भनेर जानकारी दिइरहेका छौं। हजुरको नाम के होला सर?"
भिजिटरले आफ्नो नाम भने- "समिप"।
सँगसँगै सुशिलले आफ्नो कम्प्युटरमा केही टाईप गरे र ईन्टर थिचे। रोबोटको जस्तो आवाजमा कम्प्युटरले भन्यो- "वेलकम टु आवर स्टल मिस्टर समिप।"
भिजिटर छक्क परे। आफ्नो साथी तिर हेरेर हाँसे। अनि सोधे- "कस्तो गज्जव! सबै कुरा बोल्छ?"
त्यसपछि सुशिलले उनलाई देख्न नसक्ने मान्छेहरूले कसरी कम्प्युटर चलाउँछन्, कसरी मोबाईल चलाउँछन्, प्रविधिको मद्दतले कसरी किताब पढ्छन् आदि बुझाए। उनले र अरु थुप्रैले चाख मानेर सुने।
यता वासुदेवले भने केही अन्य भिजिटरहरूलाई दृष्टिबिहिनहरुले प्रयोग गर्ने ब्रेल लिपिको बारेमा जानकारी दिँदै थिए। उनले सादा कागजमा एउटा सानो पिन जस्तो साधनले खोपेर केही लेखे। उनका वरिपरि झुम्मिएका सबैले ध्यान दिएर हेरे।
उनले लेखिसके र त्यो पाना आफ्ना समूहकै अर्का साथीलाई दिँदै भने- ल यो पढ्नुस त मित्र, मैले के लेखेको छु?
उनका अर्का साथी पनि देख्दैन थिए। ओलाले छाम्दै पढे- "हजुरहरूलाई भेटेर मलाई खुशी लाग्यो।" वरिपरिका सबै मुखामुख गर्दै छक्क भए, खुशी भए।
सुशिल र वासुदेव आँखाले देख्न सक्दैनन्। तर मनले पर पर सम्म देख्छन्। लेख्नलाई उनीहरूको स्टलको नाम ब्राईट स्टार सोसाइटी लेखिएको छ। तर यो कुनै संघ संस्थाहरूको प्रायोजनमा चलेको हैन। क्यान ईन्फोटेक हुदैछ भन्ने थाहा पाए पछि- सुशिल र बासुदेव खोज्दै खोज्दै कम्प्युटर एसोसियन पुगे र आफूहरूको उद्देश्य बताए। क्यानलाई चित्त बुझ्यो र यो सानो स्टल उनीहरूलाई निशुल्क दियो। अरु पर्चा छाप्न र अन्य लागेको केही खर्च उनीहरूले आफ्नो गोजीबाट हाले। र बसे दाजुभाइ- पाँच दिन सम्म, दिनभर त्यो स्टलमा- उनीहरूको स्टलसम्म आईपुगेका हजारौँ मान्छेहरूलाई जानकारी दिदै।
मैले पछि सोधे- किन यस्तो दुख गर्नुभा'को त सुशिलजी?
उनले भने- सबैले देख्न नसक्ने मान्छेले के नै पो गर्न सक्छ र भन्ने सोच्छन् सर। हामीले चाहि उचित वातावरण भयो भने हामी के नै पो गर्न सक्दैनौ र, भन्ने देखाउन खोजेका हौँ।
सामान बेच्ने एउटा बजार जस्तो ठाउँमा मात्र सीमित हुँदै गरेको क्यान ईन्फोटेकमा साँच्चिकै प्रविधिको नया पाटो देखाउन सफल सुशिल र वासुदेवले साँच्चिकै उनीहरूले गर्छौं भनेर लागेको काममा सफल भएका छन्। यो पोस्ट टुङ्ग्याउँदै गर्दा मलाई प्रसिद्ध गायक स्टिभ वोन्डरले भनेको एउटा भनाई याद आयो – जस्ट बिकज अ म्यान ल्याक्स दि युज अफ हिज आईस् डसन्ट मिन ही ल्याक्स भिजन। (एकजना मान्छेले आँखाले देख्न सक्दैन भिन्दैमा उसको कुनै विचार र दृष्टि नै हुँदैन भन्ने होइन्)।